Layisha Qalisa kabusha eDubai City Company bese uthola umsebenzi e-UAE
Thumela i-CV Mahhala!
Layisha kabusha - Vumela abaqashi bazi ukuthi ufuna umsebenzi omusha!
Layisha kabusha futhi Idolobha Elikhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni!
Ngokuvamile ukuthumela i-RESUME yakho ku-Dubai City Company ilula - layisha i-CV yakho e-Dubai City noma uxhumane nathi kwi-WhatsApp Group futhi ungamaminithi kude ne-Dubai Jobs Jobs yakho. Ngokuhamba kwesikhathi inkonzo yethu iyimfihlo ye-100% yabasebenzi abafuna umsebenzi kanye nabaqashi base-Dubai. Siyahlonipha ubumfihlo bakho - unikezwe la maphuzu akhethe amazinga aphezulu okuyimfihlo emsebenzini wakho wesikhathi esizayo nenkampani yethu. Okwamanje vumela abaphathi abakhulu bakuthole Emisebenzini yethu ku-Dubai Blog e-United Arab Emirates. Abaqashi, Abaqashi, nabathengi bafuna amaphrofayli okwamanje! Ngaphezu kwe-82% yabaqashi ukusesha i-CV database ngaphandle kokukhangisa imisebenzi yabo ku-GCC. Isisebenzi se-542,000 sibhalisiwe nenkampani yethu futhi sikhula nsuku zonke. Siyazi ukuthi ubani ozoqasha imisebenzi e-Dubai 2018.
Ingabe ufuna ukuthola UJob e Dubai?
Bheka ngezansi & Layisha i-RESUME ku-UAE
Qala nge-Dubai City Company
$4.99* Yebo, Sithumela i-CV yakho!
Yenza kusebenze i-Linkedin Job Hunting For $ 4.99 kuphela
Layisha kabusha EDubai City Company nethimba lethu lizothumela i-CV yakho kuphela ikhasi elilodwa ku-Linkedin Siyaqiniseka ukuthi uyibonile ngaphambili lapho abantu behambisa ama-CV kumakhasi ethu enkampani !.
I-Smart Way yokufuna kwakho umsebenzi! + Thola Umhlahlandlela Futhi Usebenze Ukuzingela Imisebenzi ngeDubai City Company (Ukugcina izinsizakalo ezikhethekile eDubai) + Thumela i-CV yami kubo bonke abaphathi nabaqondisi e-UAE ekhasini elilodwa ku-Linkedin + Usizo olwengeziwe!
Siyazethemba kakhulu ngohlelo lwethu lokufuna umsebenzi, ukuthi sihlala sinakekela noma yibaphi abafuna umsebenzi esinabo! I-100% Ngisho nge- $ 4.99 Sinikeza i-CV repost ye-CV yakho uma ungawutholi umsebenzi !.
Ngemuva kokuthi ukukhokha kuqediwe:
Isistimu ikuthatha ngokuzenzakalela ukuze ulayishe i-CV. Le nqubo ithatha izinsuku zebhizinisi ze-30 ukuqeda, futhi kuyinkokhelo yesikhathi esisodwa futhi ngeshwa ukukhokha okungabuyiselwa.
Umsebenzi eDubai kungakapheli izinsuku ze-90!
$9.99“Kuklanyelwe Izazi ezikhethekile
Sisize izinkulungwane zabantu ezifana nawe!
Layisha kabusha Inkampani yase-Dubai City Ithimba lethu lakwa-HR lizonikeza amandla inqubo yakho yokufuna umsebenzi futhi lihlanganyele nomphakathi weDubai womhlaba wonke ukuba ubuke i-CV yakho. Sisebenzelana Nabaqashi Bethu. Iqembu lethu lizosebenza ecaleni lakho nabaphathi abangaphezu kwe-500k futhi likusiza ekutholeni umsebenzi e-Emirates.
Sebenzisa ngokunenzuzo kwethu Uhlelo olukhethekile lokusesha umsebenzi Ngokulayisha Qalisa kabusha. Manje usungazama uhlelo lokucinga lomsebenzi Isiqinisekiso se-100% Ukwaneliseka! Ukukhetha okungcono kakhulu kwezindleko ukwesekwa kuzonikezwa uma ungatholi msebenzi ngezinsuku ze-90!
* Qala inqubo yokufuna umsebenzi ye-90 Izinsuku ngeDubai City Company futhi neqembu lethu nalo lizobe lisebenza ecaleni lakho ukuze uthole abaQashi kabusha bavakashele i-CV yakho. I-610M + Kufinyelela Ilungu. I-CV yakho izobonakala kubaqondisi be-HR, ama-VP's, ama-CEO's, ama-Deputy Deputy President kanye nabaqeqeshi abaphezulu eDubai.
Siyaqiniseka ukuthi ungathanda uhlelo lwethu! I-CV yakho izobonakala kubaqondisi be-HR, ama-VP's, ama-CEO's, ama-Deputy Deputy President kanye nabaqeqeshi abaphezulu eDubai.
Uma ungena kulolu hlelo futhi ungacabangi ukuthi yiyona imali engcono kakhulu ekutshaleni umsebenzi owake wakwenza. Ngemuva kwalokho ungathola i-CV repost ye-CV yakho ku-Linkedin khona lapho, akukho mbuzo obuziwe. Ngakho akulahleki neze!
Isistimu ikuthatha ngokuzenzakalela ukuze ulayishe i-CV. Le nqubo ithatha izinsuku zebhizinisi ze-90 ukuqeda, futhi kuyinkokhelo yesikhathi esisodwa futhi ngeshwa ukukhokha okungabuyiselwa.
Ukusesha Umsebenzi phakathi kwezinsuku ze-60 + Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Imali
I-100% Isistimu yokuthola umsebenzi eDubai
Layisha kabusha I-Dubai City Inkampani enezinsuku ezingu-60 imali yokubuyisela imali. Sisebenzelana Nabaqashi Bethu. Iqembu lethu lithumela i-CV yakho kumakhasi amakhulu ku-Linkedin, futhi kukusiza ekutholeni umsebenzi e-Emirates.
Sebenzisa ngokunenzuzo kwethu Uhlelo olukhethekile lokusesha umsebenzi Ngokulayisha I-Resume Yakho. Ungakwazi ukuzama umkhiqizo ngokuphelele I-RISK-FREE ngezinsuku ze-60! 100% Ukubuyiselwa imali uzokwenziwa uma ungatholi umsebenzi ezinsukwini ze-60!
* Qala inqubo yokuhlola umsebenzi nge-60 nge Dubai City Inkampani kanye neqembu lethu futhi lizothunyelwa I-CV yakho ku-Linkedin . I-CV yakho izobonakala kubaqondisi bakwa-HR, i-VP, i-CEO, abaPhini abameli abakhulu nabaqashi abakhulu e-Dubai.
Siyaqiniseka ukuthi uyibonile ngaphambili lapho abantu behambisa ama-CV kumakhasi ethu enkampani !.
Uma ungena kulolu hlelo futhi ungacabangi ukuthi yiyona imali engcono kakhulu ekutshaleni umsebenzi owake wakwenza. Khona-ke ungathola imali ye-100% ekugcineni, akukho mbuzo oceliwe. Ngakho akulahleki neze!
Iqembu lethu lizolayisha iphrofayela yakho kubaphathi bethu be-580k abaqeqeshi kanye nabaphathi be-HR
Abaqashi nabasebenzi bakwa-HR e-Dubay bazobona i-CV yakho!
Res I-Resume / Link yakho iyofinyeleleka kusuka kumakhasi ethu aphezulu!
I-Recruiter Network (i-80,000 + ochwepheshe)
Abaphathi bephrojekthi (abaphathi be-24,000)
Ama-CIOs / ama-CFO / ama-CMO (ama-10,000 + ochwepheshe)
✔Cabanga ngesicelo sami "Uhlelo lwe-Visa Sponsor Program"
✔Cabanga ngesicelo sami se-International Career
✔Faka i-CV yami e-Dubai Recruitment Companies
✔Thola abaqashi abaqondile nabaqashi ku-Linkedin
Uma kwenzeka ungatholi msebenzi ngezinsuku ze-60? Ungathumela isicelo sokubuyiselwa imali:
refund@dubaicitycompany.com Le nqubo ithatha izinsuku zebhizinisi ze-3-7 ukuqeda, futhi imbuyiselo izobuyiselwa ekhadini lakho lebhange.
Manje: Layisha i-CV!
Layisha kabusha ku-Dubai Company
Sicela Uthande Futhi Yabelane Nabangani Bakho!
Layisha kabusha ku-Emirates Umbuzo omkhulu: Kungani kufanele uthumele i-Resume yakho e-Dubai City Company ?. Kungenxa yokuthi siyinhlangano ehamba phambili edolobheni lase Dubai, e-UAE futhi isevisi yethu iyona mthombo omuhle wemisebenzi e-Dubai. * Ngeshwa ukusebenzisa le ngxenye yamasevisi wethu enkampani udinga ukuthuthukisa i-akhawunti yakho.
Eqinisweni, inkampani yethu isilokhu isiza abazingeli bezemisebenzi yamazwe ngamazwe. Ngenxa yalesi sizathu, ungathumela i-CV yakho ebuyekeziwe, uxhumane nayo Abaphathi bakwa-HR nabakwa-Recruiters e-Dubai, eGCC naseYurophu ngokubeka. Inkampani yethu inikeza isandla esiqondisayo kubantu abavela emazweni angaphandle. Ikakhulu ithimba lethu linikeza usizo kubantu abafuna umsebenzi waseNdiya kanye nabafuna umsebenzi eKapistani. Umsebenzi wethu ukuxhuma wena nabaqashi abahle kakhulu kanye nabaphathi bakwa-HR e-Dubai, e-UAE. I-Dubai City Company, ngokuhamba kwesikhathi, iyindlela ewusizo ukuthola umsebenzi eMpumalanga Ephakathi. Sisiza abantu abangathanda ukuqala umsebenzi ku-Dubai Companies. Inhloso yethu ukubeka wonke umzingeli wemisebenzi. Njengoba sekuphawulwe thina yinkampani ethandwa kakhulu e-Dubai emithonjeni yezokuxhumana. Kulowo nalowo ofuna umsebenzi ofuna ukujoyina uhlelo lwethu lokusesha umsebenzi. Ithimba lethu linikeza usizo nokusekela kwabo Ukusesha umsebenzi weGulf. Layisha kabusha ku-inkampani yethu futhi ubone imiphumela.
Ukufuna imisebenzi e-Dubai
Wonke umuntu ufuna ukuthi inkokhelo yamahhala engekho intela. Futhi yileso sizathu esiningi sokuthuthela e-Dubai, e-UAE. Amathuba akhula emakethe ye-GCC, i-Amazing umsebenzi eMpumalanga Ephakathi. kanye nemfuneko ekhulayo yabasebenzi abalungile - kodwa-ke uthola kanjani umsebenzi ofanele nekampani efanele yephakheji elilungile? Impendulo ikhona ekuzibekeni njengomuntu omele ukhetho Ngenhloso, inkampani yethu yadala ukulayishwa qalisa isigaba. Ngenxa yalesi sizathu, ungakwazi ukumane uchithe nxazonke imizuzu embalwa ungeze i-CV yakho ku-Dubai Company. Ngokuvamile, ukuthumela i-CV yakho ku-Dubai City Company kulula futhi kulula. Konke okumele ukwenze ukugcwalisa uhlelo lokusebenza lomsebenzi bese ulandela imfundo. Noma ngisho ngaphandle kokubambezeleka kwehlisa i-CV yakho kusigaba esisheshayo bese ulinda imiphumela. Imisebenzi e Dubai iphela imizuzu embalwa ngaphandle kokuphila kwakho kwephupho. Siqinile ngokweqile ngokufihlakele ngabathengi bethu bezemisebenzi kanye nabaqashi base Dubai, e-UAE futhi sinesimo sokuhlola esiqinile kakhulu. Siyahlonipha ubumfihlo bakho. Ngaphansi kwalezo zimo, awulahlekelwa lutho. Noma ngabe iyiphi insizakalo oyikhethayo, ithimba lethu lizokusiza ngalezi zinto amaphuzu okuphenya ngamathuba okuthenga. I-Dubai City Inkampani izama ukuphatha umsebenzi wokufuna bonke abafuna umsebenzi. Futhi zonke izinto zicatshangwa uma sizama ukukubeka.
Umsebenzi we-2019 e-Dubai nase-Abu Dhabi
Abu Dhabi, UAE yinhloko ye-UAE. Futhi yilapho okulandelayo kuqhutshwa khona umsebenzi olandelayo. Ukuqinisekisa ukuthi i-Resume yakho igcinwa kusesikhathini kuzinkampani zokuqasha izokuqinisekisa ukuthi uthola umsebenzi ngokushesha. Inqubo ilula kakhulu. Uma i-Resume yakho itholakala kalula kulabo abaqashile ku-database, ukuthola ukufinyelela kwiphrofayli yakho yemisebenzi e-Dubai, UAE nemisebenzi e-Abu Dhabi, i-UAE iba lula. Njengoba sikhuluma njengamanje - Abaphathi bakwa-HR e-Dubai Company bamatasa befuna abafanelekile nabakulungile. Over 82% labaqashi bafuna database ye-CV ngaphandle kokukhangisa nabo imisebenzi e-Dubai. Ngakho-ke ngesibonakaliso esifanayo, ungasondela kubo ngokusebenzisa kwethu imisebenzi yokusesha imisebenzi e Dubai. Abasebenzi abangaphezu kwe-542,000 babhalisiwe nenkampani yethu yase-Dubai. Ngasohlangothini oluhle futhi sikhula nsuku zonke. Ngakho akudingeki ukhathazeke ngokuthola umsebenzi e-Dubai. Isibonelo, inkampani yethu iyayazi umsebenzi wokuqasha. Futhi siyazi ukuthi ngubani ozoqasha imisebenzi e-Dubai 2018. Ungakhohlwa Ukulayisha I-Resume Yakho ku-Bayt.com umlingani wethu Indawo yomsebenzi we-CV. I-Bayt ihola phambili indawo yomsebenzi eGulf naseMpumalanga Ephakathi. Nge-Bayt, ungalayisha kabusha, Yakha iphrofayli, Sesha Imisebenzi e-Dubai futhi uthole Imisebenzi ekhethiwe ye-2018 Jobs. Bayt.com ukuxhuma abafuna umsebenzi nabaqashi nabaqashi base-UAE. Le nkampani inezeluleko ezimangalisayo ze-expat futhi enye iphuzu eliyinhloko ekufuneni umsebenzi yilona lethu Imisebenzi yase Dubai Ibhulogi. Ngalokhu engqondweni, inkampani iphinde ifune ukuqasha abaphathi abasha emakethe yomsebenzi we-UAE.
Umqashi wethu Wokuqasha e-Dubai
sozakwethu Bayt.com iyindawo ehamba phambili yomsebenzi eMpumalanga Ephakathi naseGulf namhlanje. Umsebenzi we-Bayt.com, umela abafuna umsebenzi kuwo wonke amazinga emisebenzi, izimboni, kanye nezizwe esifundeni. Ukuphela komkhawulo wesayithi yabo ukuthi abasebenzisi Amaqembu we-WhatsApp for Recruitment e Dubai Ngazo zonke izindlela, Umlingani wethu isebenza nezinkampani eziyizinkulungwane kanye nabaphathi bakwa-HR e-Dubai. Ukuqaphela ngokuqinile abaphathi abakhulu. Ngakho uma ungumhloli womsebenzi ku eMpumalanga Ephakathi okuhambisana nalokhu ukuthola amathuba emisebenzi emabhizinisini amancane kuya emazweni amaningi amakhulu izinhlaka zikahulumeni. Ngenxa yalokho, inkampani yethu isiza abazingeli bemisebenzi e-Dubai Blog ukuze badonse ngempumelelo futhi baqashe ochwepheshe nabaqeqeshiwe abafanelekayo nsuku zonke ngisho ne-Google Career e-Dubai. Eyasungulwa ku-2000, i-Bayt.com isibe sesinye segama elidumile kakhulu elihlonishwayo nehlonishwayo le-Dubai Jobs esifundeni e-United Arab Emirates. I-Bayt.com inomakhelwane Dubai City, i-United Arab Emirates lapho ungalayisha khona i-Resume yakho bese uthola umsebenzi e-Dubai City futhi unamahhovisi wesifunda e-Abu Dhabi, e-Amman, e-Beirut, e-Cairo, e-Casablanca, e-Doha, eJeddah, e-Khobar, e-Kuwait naseRyad.
Ukuthumela i-CV yakho nenkampani yethu
Thumela i-CV yakho ku-intanethi ku- Izinkampani ze-Fortune 500 e Dubai City Kulungile futhi kulula! Joyina i-Dubai Imisebenzi ye-Whatsapp Group. Ngokuqinisekile, Qala Kuqinisekisiwe Uhlelo lokubeka umsebenzi we-$ 10? Umhlaba wokusesha umsebenzi e-Dubai ushintshile. Manje sisiza ngaphakathi I-Dubai WhatsApp Group Ingabe usesikhathini nezindlela zakamuva? Ngokuba ilungu lomsebenzi wezisebenzi zeDaily City Company ugcwalisa uhlelo lokusebenza lomsebenzi ukuthuthukisa amathuba akho okuthola umsebenzi. Futhi Umhlahlandlela wokuxoxa ngenqubekela phambili. Uhlelo lwethu lokuxhumeka emsebenzini luyi-100%. Okusemqoka futhi uzojoyina iqembu lezimfanelo eziphezulu kakhulu zekhwalithi "abaqokelwe phezulu" eMpumalanga Ephakathi. Ungase futhi uthole ukusekelwa okugcwele kithi futhi ube nama-Amazing Expats Advice e-Dubai. * Zonke izinkambu ezidingekayo kanye nezigaba zesicelo somsebenzi kumele zigcwaliswe ngokugcwele ngokwakho njengoba kuboniswe ekhasini lokudala le-CV ku-Dubaicitycompany.com. Imibuzo eyengeziwe okufanele igcwaliswe yi-Non-Residents, kanye Imininingwane ye-Visa.
Qalisa kabusha Ukulayisha ku-Dubai City Company kuyisihluthulelo Sempumelelo!
Izixhumanisi Zangaphakathi - Amakhasi Wethu Omnandi!
Umsebenzi oqinisekile we-100% e-dubai (2)
Okumele kwenziwe (1)
Amaqembu emisebenzi ku-whatsapp (1)
Imisebenzi e-dubai yabezinye izizwe 2020 (1)
Yini etholakala kalula.jobs e-dubai kubantu baseNdiya (1)
I-Lien de groupe dubai (2)
Imisebenzi emisha yokufundisa eDubai (1)
I-Copyright © 2020 Dubai City Company. Wonke Amalungelo Agodliwe
Ayikho inhlanhla namuhla
Mahhala! - Thola ithuba lakho uwine uJobe eDubai!
Cishe wonke umuntu angafaka isicelo seDubai Job Lottery! Kunezidingo ezimbili kuphela zokufanelekela ukuthola i-UAE noma i-Qatar Employment: Sebenzisa i-Dubai Visa Lottery ukuthola ngokuchofoza okumbalwa uma ulungela i-Employment Visa. Noma isiphi expat yakwamanye amazwe, okungeyona eye-UAE kazwelonke, idinga i-visa yokuhlala futhi isebenze eDubai. Nge-lottery yethu, uzowina I-Residency / Working visa evumela ukuthi usebenze eDubai!
Zama inhlanhla yakho
Uma uwina umsebenzi eDubai udinga ukubhalisa imininingwane yakho.
Ikhodi yakho yekhuphoni isebenza e-
Qhubeka Layisha kabusha - Ngomsebenzi omusha!
Bhalisa i-CV e-UAE!